hamropusta.comLatest News मासुले यसरी बदल्दै छ नेपालीको खानपान संस्कृति? – hamropusta.com
बितेका दशकहरूमा नेपालीको खानपानको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, मासुको उत्पादन र उपभोगमा आएको विस्तार त्यसैको दृष्टान्त हो।
अधिकांश नेपाली परिवारका लागि भान्सामा मासुका परिकार ‘लक्जरी’ हुने जमानामा शुरू भएको थियो, भ्याली कोल्डस्टोर। चार दशकअघि काठमाडौंको नयाँ बजारमा पहिलो दिन १५ किलो कुुखुराको मासु बेचेर कारोबार थालेको यो पसलले अहिले दैनिक १० हजार किलोभन्दा धेरै मासु बिक्री गर्ने यसका सञ्चालकमध्येका एक सक्षम घिमिरे बताउँछन्। विशेष अवसर, जमघट वा उत्सवमा मात्रै घरमा मासु पाक्ने जमानाबाट नेपाली समाज बदलिएको एउटा साक्षी भ्याली कोल्ड स्टोर हो।
बितेका दशकहरूमा नेपालीको खानपानको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, त्यसैको प्रतिविम्बन मध्यमवर्गको भान्छामा मासुका परिकारले प्रवेश पाएका छन्। दशैं र खास चाडबाडमा खाइने मासुका परिकार अचेल उत्सव र अवसरविना पनि मध्यमवर्गीय परिवारका भान्छामा सजिलै पाक्छन्। शहर मात्र होइन, नगरोन्मुख गाउँमा समेत पाहुनाको स्वागतका लागि माछामासुका परिकार पकाउने चलन सामान्य बन्दै छ।
तथ्यांकले पनि पछिल्ला दशकमा नेपालमा मासुको उत्पादन र उपभोग दुवैमा अभूतपूर्व विस्तार भइरहेको देखाउँछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मासुको उत्पादन ५ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन पुग्यो। एकै वर्षमा मासुको उत्पादन ह्वात्तै बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। पशुजन्य उत्पादनका विषयमा जानकार सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, एकै वर्षमा मासुको उत्पादनमा यो परिमाणमा वृद्धि आएको भने होइन। पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकाल कृषि मन्त्रालयको अध्ययनले अघिल्ला वर्षहरूमा वास्तविकताभन्दा न्यून मात्रै तथ्यांक संकलन गरेका कारण तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा परिमाण धेरै देखिएको उनले बताए।
अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार, नेपालीको प्रतिव्यक्ति मासुको उपलब्धता वार्षिक औसत १८ किलोग्राम पुगेको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले पोषणका दृष्टिले तोकेको न्यूनतम १४ किलो मासुको उपलब्धताको सीमाका तुलनामा धेरै हो। चार दशकअघिसम्म नेपालीको औसत वार्षिक मासु उपलब्धता वार्षिक ६ किलोभन्दा थोरै मात्र थियो। कुखुरा उत्पादनमा आएको अभूतपूर्व विस्तारले यो परिवर्तन सम्भव बनाएको हो।